မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း မှ ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း မှ ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ
RH Co. Ltd isadistributor of international home appliance products (SYINIX AND ALPHA ELECTRONICS). We are hiringaSocial Media Manager to be based in our Yangon office to oversee the social media marketing strategy and content of our various online channels.
RH Co. Ltd isadistributor of international home appliance products (SYINIX AND ALPHA ELECTRONI ...
နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။